कफी "Mokkona"। Moccona कन्टिनेन्टल गोल्ड: समीक्षा
कफी अन्तिम शताब्दीको नब्बे देखि रूस मा ज्ञात "Mokkona"। यो समयमा, घुलनशील granules आफ्नो प्रशंसक फेला परेन। तर पनि बीचमा यी केही मान्छे थाहा छ कि "Mokkona" - एक उत्पादन लाइन ज्ञात डच कम्पनी "डाउ Egberts '। यसलाई विभिन्न उत्पादन कि कुख्यात छ कफी को ब्रान्डहरु। यस लेखमा हामी "Mokkony" को धेरै प्रकार मा हेर्न हुनेछ। बरु, हामी पहिले नै यो खुशबूदार पेय स्वाद भएकाहरूलाई को प्रतिक्रियाहरू विश्लेषण। हामी विशेष शब्दहरू सुरु, communiques पढ्न: "म तत्काल कफी को ठूलो प्रशंसक छैन ..." वा "म सधैं भन्ने अरेबिक कफी ... मात्र टर्क मा पीसा छ विश्वास छ।" को "Mokkone" यी उम्दा बारेमा धारणा कस्तो गठन गरिएको छ? अगाडि हेर्दै हामी एकदम सकारात्मक, भन्नुहोस्। सबै पछि, दृढ अब तत्काल र उत्पादन स्थिर-सुकेको कफी। यो के हो? यसलाई पढ्न।
कम्पनी "डाउ Egberts" र आफ्नो उत्पादन
कफी "Mokkona" को इतिहास एउटा सानो सहरमा Yaura (द नेदरल्यान्ड्स), एक Egbert Dau किराना पसल खोलियो गर्दा 1753 मा शुरू भयो। उहाँले तथाकथित उपनिवेश सामान, अर्थात्, चिया, सुर्ती मा कारोबार। र, को पाठ्यक्रम, को किराना पसल को समतल मा एक केन्द्रिय स्थान कफी सेवा गरे। मिस्टर डाउ लगनशील विक्रेता थियो, र सामान को सबै भन्दा राम्रो उत्पादकहरु देखि चयन गरियो। बिस्तारै, कम्पनी "डाउ Egberts" नेदरल्यान्ड भर चिनिन थाले। त्यसपछि चिया र कफी एक डे (संस्थापक गरेको हस्ताक्षरहरू) संग लोगो अन्य युरोपेली देशहरूमा मन परायो। यसलाई राजकुमार र पछि मालिकहरूले कम्पनीको उच्च गुणवत्ता स्तर राखिएको बताए गर्नुपर्छ। तर एकै समयमा तिनीहरूले प्राविधिक प्रगति संग चरण मा marched। 1954 मा पहिलो तत्काल कफी संसारमा देखा छ जब, "डाउ Enberts" प्रारम्भिक sixties देखि पहिलो एक को पाउडर उत्पादन गर्न थाले।
नयाँ कफी "Mokkona" के छ
Sublimation - एक प्राविधिक सफलता भनेर ताजा उत्पादन को स्वाद र सुगन्ध संरक्षण गर्न अनुमति दिन्छ। स्वाभाविक, फर्म "डाउ Egberts 'यो नवीनता को बजार मा सामान्य परिचय बाट aloof बाँकी छैन। के distinguishes तत्काल कफी एक सरल तत्काल देखि? पुरानो प्रविधि बलियो पेय पीसा, त्यसपछि यसलाई evaporated छ। परिणामस्वरूप पाउडर कफी को reminiscent छ, तर स्वाद बिल्कुल गलत थियो। Sublimation - एक पूर्ण बिभिन्न प्रक्रिया। यो प्रविधिमा, ताजा पीसा कफी छैन evaporated र स्थिर छ। त्यसपछि बरफकोक्रिष्टल vacuo मा सुकेको छन्। फलस्वरूप, नयाँ कफी "Mokkona" (र यो छ स्थिर-सुकेको उत्पादन) उत्पादन को स्वाद र सुगन्ध कायम रहन्छ। यो ठूलो granules छ। र तरिका द्वारा, थप ठोस। बैंकों 'Mokkony को तल "तपाईं एक पारंपरिक घुलनशील कफी जस्तै धूलो देख्नेछन्। र कसरी zaparivat sublimated उत्पादन? सामान्य तरिकाले - बस पानी उम्लिरहेको थप्नुहोस्। र तपाईंलाई रुचि त्यसपछि रूपमा - एक क्रीम वा दूध, चीनी वा मह।
मा रूसी "Mokkona"
कफी Moccona सोभियत संघ र फलाम पर्दा को गिरावट पछि देशमा देखा गरेको पहिलो आयात ब्रान्डहरु भयो। मात्र खराब माल को प्रारम्भिक नब्बे वा हामीलाई विदेश बाट रिपोर्ट गरिएको हामी कसरी सम्झना। र यो सबै रूसी आयात लागि तीव्र इच्छा "एक धमाका साथ" प्रयोग भएको थियो। तर "Mokkona" जन देखि बाहिर खडा। पहिले, स्टाइलिश जार। केही प्लास्टिक, र गिलास। र यो एक स्क्रू-जस्तो ट्यूब थियो कवर। यो एक राम्रो स्वाद संरक्षण लागि बनाउँछ। र धेरै मान्छे, को पट चिया वा मसला भण्डार कफी को प्याकेजिङ्ग खाली। तर केवल कन्टेनर उपभोक्ताहरु "Mokkona" सम्झना। contemptuously आफ्नो नाक wrinkled र "म ersatz खान छैन", भन्नुभयो गर्नेहरूलाई Moccona घुलनशील कफी मा आफ्नो विचार संशोधित। र 2013 मा, कम्पनी उत्पादन को रूसी बजार दुई नयाँ रेखाहरू गर्न शुरू। यो प्रिमियर-वर्ग उत्पादनहरु - "हल्का रोस्ट" र गाढा रोस्ट, साथै सुन्दर स्वाद coffees - "कर्मेल", "भेनिला", "चकलेट" र "हेजलनट"।
Moccona कन्टिनेन्टल गोल्ड
सस्ता माल मा embarking अघि, गरौं prodegustiruem पुरानो क्लासिक उदाहरण। "Mokkona कन्टिनेन्टल गोल्ड" ( "कन्टिनेन्टल गोल्ड") 47.5, 95 र 190 ग्राम को क्षमता संग airtight ढक्कन संग ग्लास जार मा उत्पादन गरिएको छ। 75 ग्राम वजन लचिलो प्याकेजिङ्ग रूपमा उपलब्ध छैन। यो पुरानो शैली कफी। उहाँले - घुलनशील। मूल्य लागि, यो उत्पादन खाली जस्तै कफी को लागि एक सानो माथि औसत भरिन्छ। सानो जार लायक एक सय र असी rubles, औसत - तीन सय र दस, ठूलो - पाँच सय र पचास। मिश्रणों को लागू गर्दैन "कन्टिनेन्टल गोल्ड" निर्माता - कफी एक सय प्रतिशत अरेबिक देखि बनेको छ। उपभोक्ता समीक्षा यस उत्पादन मध्यम रोस्ट पारित गरेको छ भन्छन्। स्वाद मा एक पारंपरिक तत्काल कफी रूपमा टाट पल्टिन लाग्यो छैन। पिउन (उम्लिरहेको पानी पाउडर चम्चा आधा कप), बलियो संतृप्त छ। अरोमा प्राकृतिक नजिक छ।
ठीक coffees "डाउ Egberts"
2013 मा, दृढ कफी दुई नयाँ प्रजातिहरू "Mokkona" जारी, बलियो कालो पेय को रूसी साँचो प्रेमीहरूको खुसी छ। समीक्षा एक गाढा-रंग granules रूपमा "गाढा रोस्ट" वर्णन। पीसा गर्दा बलियो कफी अलिकति तीता र उज्ज्वल, धनी aftertaste संग प्राप्त छ। निर्माता अनुसार, "गाढा रोस्ट" अनाज को उत्पादन को लागि बलियो बरस रही, हो रंग मा गाढा बनेर। त्यसपछि तिनीहरूले melyat र बलियो कफी पीसा। थप पेय sublimation प्रक्रिया, जसद्वारा ठोस granules प्राप्त बित्दै। palpable तीता संग बलियो कफी प्रेमीहरूलाई जस्तै "गाढा रोस्ट"। र हल्का स्वाद र सन्तुलित फूलगुच्छा मोल गर्नेहरूका लागि, "हल्का रोस्ट" सिर्जना गरिएको थियो। , कफी प्रकाश को granules अन्नको प्रकाश रोस्ट पारित किनभने। 47.5 र 95 ग्राम वजन airtight ढक्कन संग ग्लास जार मा उपलब्ध प्रिमियम दुवै संस्करण।
"Mokkony" को स्वाद प्रकार
उत्पादन गाढा रोस्ट connoisseurs कुनै दूध खाने सिफारिस छ भने प्रकाश granules को क्रीम थप्न, त्यसपछि राम्रो देखि पिउन। स्वाद नरम, अलि caramelizing बन्नेछ। तर क्यान्डी "गाई" कम्पनी "डाउ Egberts" संग स्वाद अनुभूति को प्रशंसक लागि वरदान तयार भएको छ। यो - "Mokkona कर्मेल।" तपाईं स्वादिष्ट यो ब्रान्ड को किसिमहरु समीक्षा peruse भने, उच्चतम प्रशंसा यसलाई जित्यो छ। तर विकल्प व्यापक छ: कैंडी बाहेक, कम्पनी चकलेट, हेजलनट र वेनिला को सुगन्ध एक कफी जारी। सील आवरण-ट्यूब तपाईं लामो समय को लागि गर्न सक्छन् भित्र odors राख्न र तिनीहरूलाई पेय दिन अनुमति दिन्छ। "कर्मेल" र "चकलेट" कुनै पनि अम्लता सहनु सक्ने छैन ती अनुरूप हुनेछ। "Hazelnat" को पेय एक बल्लतल्ल देख्न सकिने तीता र तीव्र nutty स्वाद दिन्छ। "भेनिला" नरम विदेशी Smells संग सारा घर भरिन्छ। यो पेय विनीज पेस्ट्री सँगसँगै, राम्रो छ।
कफी "Mokkona": मूल्य
यस्तो "कन्टिनेन्टल गोल्ड" रूपमा दृढ को क्लासिक उदाहरणहरू ठूलो बजार को समतल मा भयो भने, स्वाद प्रकार धेरै उच्च छन्। 47,7 र 95 ग्राम मा - विशेष प्रजातिहरू ( "गाढा" र "हल्का रोस्ट") दुई tarakh उपलब्ध छन्। तिनीहरूले क्रमशः 182 र 328 rubles खर्च। तर स्वादिष्ट coffees "Mokkona" मात्र ठूलो जार मा बेचे। र चार सय rubles granules को नब्बे-पाँच ग्राम को यस्तो प्याकेज गर्नुपर्छ।
सारांशमा त। उपभोक्ताहरु साधारण "Mokkonu" प्रशंसा गरे। यो घुलनशील पेय स्वाद र प्राकृतिक कफी को सुगन्ध। कस गन्ध weathering जार रोक्छ बन्द। यो पेय, बलियो कुरकुरा, सुगन्धित बाहिर आउँछ। मूल्य - उपभोक्ताहरु कफी "Mokkona" याद छ कि मात्र नकारात्मक। तर रूपमा यो "बाइट्स" वस्तुहरू कहिलेकाहीं साझेदारी र छूट बेचन। सुपरमार्केट मा अक्सर स्वाद प्रजातिहरू "Mokkony" सबै दुई सय र पचास rubles खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
लाभ र कफी को हानि
कसरी टूर्कू मा कफी बनाउन
वजन लागि सबैभन्दा प्रभावकारी व्यायाम
प्रक्रिया र बचत बैंक मा बंधक को दर्ता को चरण
JENS Stoltenberg। शीर्ष गर्न बाटो
जो उरोलोजस्त छ - लगभग आफ्नो जीवन सबैलाई थाह